कुन राशिका केटीहरू हुन्छन् समर्पित जीवनसाथी ? – Everest Dainik – News from Nepal
कुन राशिका केटीहरू हुन्छन् समर्पित जीवनसाथी ?
सबैलाई आफ्नो पति या पत्नीले समर्पण र प्रेमभाव प्रदर्शित गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर जीवनको कुन मोडमा कसको हातबाट चाहेर वा नचाहेर आफ्नो जीवनसाथीप्रति धोका हुन पुग्छ, भन्न सकिन्न ।
फेरि कुनै पनि मान्छे आफ्नो जीवनसाथीप्रति कतिको इमानदार या धोकेबाज निस्किन्छ भन्ने कुरा त उससँग केही समय गरेपछि मात्र थाहा हुने हो । तर ज्योतिषशास्त्रमा राशिको आधारमा कुन राशिका मानिस आफ्नो जीवनसाथीप्रति इमानदार या समर्पित रहन्छन् भन्नेबारे समेत थाहा हुने बताइएको छ ।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार केही विशेष राशिका व्यक्ति आफ्नो जीवनसाथीप्रति बढी नै समर्पित हुने बताइएको छ । आज जानौं ती खास-खास राशिबारे जसमा जन्मेका व्यक्ति जीवनसाथीका रूपमा सबैभन्दा बढी समर्पित हुने गर्दछन् ।
मेष राशिका महिला-पुरुष सम्बन्धको मामिलामा साह्रै नै भरपर्दा मानिने गर्दछन् । यिनीहरू आवश्यकता पर्दा सधैं आफ्नो जीवनसाथीसँग उभिने गर्ने भएकाले यस्ता जीवनसाथी पाउनु भाग्यको कुरा मानिन्छ । मेष राशिका जातक भरपर्दा जीवनसाथी हुनुका साथै बलिया सहारा पनि हुने विश्वास गरिएको छ ।
२. कर्क राशि
कर्क राशिका जातक एकपल्ट कसैसँग प्रेम गरे जीवनभरी साथ निभाउने गर्दछन् । उनीहरू लामो मात्र हैन आजीवन सम्बन्धका लागि भरपर्दा मानिन्छन् । उनीहरूले एकपल्ट कसैको हात समातेपछि जीवनभर साथ् दिने गर्दछन् ।
कन्या राशिका जातक पनि प्रेम र दाम्पत्य जीवनका मामिलामा सदैव आफ्नो जीवनसाथीप्रति वफादार रहने गर्दछन् । यस राशिका मानिस भावनात्मक रूपले समेत आफ्नो जीवनसाथीसँग जोडिने भएकाले यिनीहरू राम्रा दाम्पत्य साथी बन्न सक्दछन् ।
४. तुला राशि
तुला राशिका जातक रोमान्टिक हुनुका साथै जीवनसाथीप्रति इमानदार रसमर्पित पनि हुने गर्दछन् । यिनीहरू दाम्पत्य जीवनको निर्वाह राम्रो तरिकाले निर्वाह गर्ने मात्र होइन राम्रो या खराब समयमा समेत आफ्नो जीवनसाथीसँगै उभिने खालका हुन्छन् ।
यस राशिमा जन्मेका मानिस साँचो मनले प्रेम गर्ने खालका हुन्छन् । त्यसले प्रेम सम्बन्ध निर्वाह गर्दा होस् या दाम्पत्य जीवनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा उनीहरू सदैव आफ्नो साथीप्रति वफादार रहन्छन् । तुयति मात्र होइन यस राशिमा जन्मिएका मानिस आफ्नो जीवनसाथीको मान-सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा र भावनाप्रति समेत सदैव सकारात्मक रहने गर्दछन् ।
ट्याग्स: Horoscope, rashi phal